Petra-kevitry ny fameno - Wikipedia
Ny petra-kevitry ny fameno dia petra-kevitra ampiasaina amin'ny fanaovana fanadihadiana izay nampiasaina nanomboka tamin'ny taonjato faha-19 mba hoenti-manazava ny fiforonan'ny lahatsoratry boky dimy voalohany ao amin'ny Baiboly (ny Pentateoka), sy ny fotoana mety nanoratana azy, amin'ny alalan'ny fiheverana fa nisy lahatsoratra voalohany izay notovonana sy nofenoina miandalana mandra-pahazoana ny endrik'ireo boky ireo araka ny ahalalana azy ankehitriny. Ny fomba fiasa ampiasaina dia ny Redaktionsgeschichte.
Ny petra-kevitry ny fameno dia nivoatra tamin'ny taonjato faha-19 sy faha-20, ka tamin'ny volohany izy dia nipoitra noho ny tsy fahafaham-po tamin'ny fanazavana omen'ny petra-kevitra ara-tahirin-kevitra, ary nafatratra ny fara tampony izy tamin'ireo taona 1970 tamin'ny famoahan'i John Van Seters sy Rolf Rendtorff ary Hans Heinrich Schmid ny voka-pikarohany tao amin'ny bokin'izy ireo mitondra ny lohateny hoe An Introduction to the Bible.
Fintinan'i Van Seters’ amin'ny hoe "loharano telo na soso-dahatsoratra ao amin'ny Pentateoka" ilay petra-kevitra, izay ka fantatra amin'ny hoe Iahvista (J) sy Mpisorona (P) ary Deoteronomista (D). Amin'io petra-kevitra io dia tsy isan'ny loharano na tahirin-kevitra niaingana tamin'ny fanoratana ny Pentateoka ny loharano elohista ao amin'ny petra-kevitra ara-tahirin-kevitra. Nalahatr'i Van Seters’ ara-potoana toy izao ireo loharano ireo: DJP.
ny loharano deoteronomista (D) dia mety nosoratana manodidina ny taona 700 tal. J.K.;
ny loharano iahvista (J) dia mety nosorfatana manodidina ny taona 600 tal. J.K. nandritra ny vanim-potoan'ny fahababoan'ny Jiosy tany Babilona;
ny loharanion'ny Mpisorona (P) dia mety nosoratana manodidina ny taona 400 tal. J.K. mandritra ny vanim-potoana aorian'ny fahababoana.
Tsy io irery no ezaka fanitsiana ny petra-kevitra ara-tahirin-kevitra, nefa iray amin'ireo lohalaharana amin'ny fomba fanadihadiana ny Pentateoka sady heverin'ny mpikaroka maro ho azo tsara ampiasaina.
Nanomboka tamin'ny taona 1980 dia nampiasain'ny mpikaroka indray ny petra-kevitry ny fameno sady nampiarahiny tamin'ny petra-kevitry ny sombin-dahatsoratra nataon'i Friedrich Schleiermacher, izay mifameno aminy. Manazava ny fisian'ny tsy fifanarahana hita eo amin'ny lahatsoratra io petra-kevitra io, ka amin'izany dia heverina fa ny fisian'ny tahirin-kevitra (lahatsoratra) voalohany indrindra no manaporofo ny firaisan-drafitra sy firaisan-dohahevitra ao amin'ny Testamenta Taloha, fa ny petra-kevitry ny sombin-dahatsoratra kosa manazava ny fahasamihafan'ny fomba fanoratra.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Petra-kevitry_ny_fameno&oldid=976743"
Voaova farany tamin'ny 11 Novambra 2019 amin'ny 08:48 ity pejy ity.